Tag: tontolo teknolojia marketing | Martech Zone
Tag: tontolon'ny teknolojia marketing
Inona no mety ho vokany raha nianjera tamin'ny tany ny tilikambonao? Hevitra iray izay nahagaga ahy ny sabotsy vitsivitsy lasa izay, rehefa nilalao Jenga ny zanako raha mbola niasa tamina famelabelarana vaovao momba ny antony tokony hamerenan'ireo mpivarotra ny eritreritr'izy ireo ny antontam-teknikany. Nahagaga ahy fa ny fitobian'ny haitao sy ny tilikambon'i Jenga dia tena manana zavatra itoviana. Jenga, mazava ho azy, dia lalaovina amin'ny fametahana ireo takela-by mandra-pahatongan'ny iray manontolo
Ny angano momba ny DMP amin'ny marketing
Alatsinainy, Jolay 11, 2016 Sabotsy, Janoary 14, 2017 George Corugedo
Ny Data Management Platforms (DMPs) dia tonga teny an-toerana taona vitsivitsy lasa izay ary hitan'ny maro ho mpamonjy ny marketing. Eto, hoy izy ireo, dia afaka manana ny "firaketana volamena" ho an'ny mpanjifanay izahay. Ao amin'ny DMP, ny mpivarotra dia mampanantena fa afaka manangona ny fampahalalana rehetra ilainao ianao amin'ny fahitana 360-degre an'ny mpanjifa. Ny olana tokana - tsy marina fotsiny izany. Gartner dia mamaritra ny DMP ho lozisialy izay mihinana angona avy amin'ny loharano maro